အာဆင်နယ်အသင်း၏ FA ဖလားပွဲစဉ်အား ကြိုတင်သုံးသပ်ကြည့်ခြင်း	Gunner Saw	ဆောင်းပါး	ကစားမည့်ပွဲ - အာဆင်နယ် Vs လီဗာပူးလ် ကစားမည့်အချိန် - မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ်။ ကစားမည့်ကွင်း - အမ်းမရိတ်။ +++ +++ +++ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမှ ပူပူနွေးနွေးတွေ့ထားကြတဲ့အသင်းနှစ်သင်းပါ။ အဲဒီတုန်းကတော့ အဝေးကွင်းမှာ အာဆင်နယ်က ၅-၁ နဲ့ ဂိုးပြတ်ရှုံးခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ အာဆင်နယ်အတွက် ကွင်းလယ်ခံစစ်ပြီပြီပြင်ပြင် မကစားနိုင်ခဲ့မှုက အဓိကထိုးနှက်ခဲ့တာပါပဲ။ ဆွာရက်ဇ်၊ စတာရစ်ခ်ျနဲ့ စတာလင်တို့ရဲ့ သုံးယောက်တွဲလုံးတွေက အဲဒီနေရာမှာ ခပ်လေးလေးကစားနေတဲ့ အာတီတာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ နေရာလွတ်တွေကနေ မွှေနှောက်ကစားခဲ့တော့ အာဆင်နယ်ခံစစ်အတော်လေး ရုပ်ဆိုးခဲ့တယ်။ အခု ဖလာမီနီပြန်ပါမယ်ဆိုတော့ ကွင်းလယ်ခံစစ် အတော်ငြိမ်သွားနိုင်လို့ အာဆင်နယ်ရလဒ်ကောင်းကို ပြန်မျှော်လင့်လို့ ရပါတယ်။ ကာဇိုလာမကစားနိုင်ပေမယ့် သူ့အစားပိုဒေါစကီးဝင်ကစားခဲ့ရင် ဂျီရော့တစ်ဦးတည်းနဲ့ အလုပ်မဖြစ်တဲ့ တိုက်စစ်ပိုင်းက အဆင်ပြေသွားနိုင်ပါတယ်။ ဆွာရက်ဇ်၊ စတာရစ်ခ်ျတို့နဲ့ လစ်ဗာပူးလ်ဂိုးမြူးပေမယ့် ပြိုင်ဘက်တိုက်စစ်ကသာ ထိထိရောက်ရောက်ထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့ရင် ခံစစ်ပြိုပြီး လစ်ဗာပူးလ်ရုန်းရတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကွင်းလယ်မှာ အာတီတာနဲ့ ဖလာမီနီကို တွဲမသုံးခဲ့ရင်၊ ပိုဒေါစကီး၊ အိုဇေးလ်၊ ဂျီရော့၊ ရိုစစ်စကီးတို့ အစုအဖွဲ့နဲ့ အာဆင်နယ်ရလဒ်ကောင်းတစ်ခုရဖို့ မခက်ပါဘူး။ တစ်ခုရှိတာက ဒီပွဲပြီးရင် ဘေယန်မြူးနစ်နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ရှုံးထွက်အဆင့်က စောင့်ကြိုနေတော့ အာစင်ဝင်းဂါးအနေနဲ့ ဘယ်ပြိုင်ပွဲကို ပိုဦးစားပေးမလဲဆိုတာက စောင့်ကြည့်ချင်စရာပဲ။ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲဆက် ရလဒ်မကောင်းခဲ့တဲ့အတွက် ဒီပွဲက လူစုံထုတ်ပြီး ရုန်းရမယ့်ပွဲပါ။ FA ဆိုတာကလည်း ဖလားလက်မဲ့အိပ်မက်ဆိုးတွေကို အဆုံးသတ်မယ့် အာဆင်နယ်အတွက် ဒီရာသီမှာ မျှော်လင့်ချင်စရာ အကောင်းဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်ကိုသာ မဲပေးပြီး အရန်တချို့ပွဲထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အာဆင်နယ် ရုန်းကန်ရနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်လူစာရင်းအတိုင်း၊ ပုံမှန်ခြေစွမ်းအတိုင်းဆိုရင်တော့ ဒီပွဲဟာ အာဆင်နယ်အတွက် အနိမ့်ဆုံးသရေပါ။ ပိုပြီးတိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင် ၁-၀၊ ၂-၁ လောက်နဲ့ ကပ်နိုင်သွားနိုင်တယ်။ Comments (1)
အာဆင်နယ်အသင်း၏ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် (၂၆)အား ကြိုတင်သုံးသပ်ကြည့်ခြင်း	Gunner Saw	ဆောင်းပါး	ကစားမည့်ပွဲ - အာဆင်နယ် Vs မန်ယူ ကစားမည့်အချိန် - မြန်မာစံတော်ချိန် ကြာသပတေးနေ့မနက် ၂:၁၅ နာရီ။ ကစားမည့်ကွင်း - အမ်းမရိတ်။အာဆင်နယ်အတွက် တကယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန် ရောက်လာပါပြီ။ ရှေ့ကပွဲမှာ ချဲလ်ဆီးသရေကျသွားတဲ့အတွက် ဒီပွဲသာနိုင်လိုက်ရင် အာဆင်နယ်ထိပ်ဆုံးပြန်ရောက်သွားမယ့်အပြင် အသင်းရဲ့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းပါ ပြန်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာသာ ရလဒ်မကောင်းရင်တော့ အာဆင်နယ်အဖို့ ချန်ပီယံမျှော်လင့်ချက်က ပိုမိုဝေဝါးသွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီပွဲက အာဆင်နယ် မဖြစ်မနေအနိုင်ပြန်ယူရမယ့်ပွဲ ဖြစ်နေတယ်။ Read more... Feb07
အာဆင်နယ်အသင်း၏ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် (၂၅) အား ကြိုတင်သုံးသပ်ကြည့်ခြင်း	@Gunner Saw@	ဆောင်းပါး	"အာဆင်နယ်အသင်း၏ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် (၂၅) အား ကြိုတင်သုံးသပ်ကြည့်ခြင်း"ကစားမည့်အသင်း - လစ်ဗာပူးလ် Vs အာဆင်နယ်ကစားမည့်အချိန် - စနေနေ့ည မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ်။ကစားမည့်ကွင်း - အန်းဖီးလ်+++ +++ +++
နောက်ဆုံးငါးနှစ်အတွင်း လစ်ဗာပူးလ်ကွင်းမှာ အာဆင်နယ်ရှုံးပွဲမရှိခဲ့ဘူး။ သုံးပွဲနိုင်၊ နှစ်ပွဲသရေနဲ့ ရလဒ်ကောင်းခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကတင် ကာဇိုလာ၊ ပိုဒေါစကီးတို့ သွင်းဂိုးတွေနဲ့ အာဆင်နယ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီတော့ အန်းဖီးလ်ကွင်းမှာ လစ်ဗာပူးလ်ကို အာဆင်နယ်ရှိန်နေမှာမဟုတ်ဘူး။
အာဆင်နယ်အသင်း၏ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် (၂၄) အား ကြိုတင်သုံးသပ်ကြည့်ခြင်း	Gunner Saw	ဆောင်းပါး	ကစားမည့်ပွဲ - အာဆင်နယ် Vs ခရစ်စတယ်ပဲလေ့စ် ကစားမည့်အချိန် - မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ်။ ကစားမည့်ကွင်း - အမ်းမရိတ်။ကြားရက်မှာ ဆောက်သမ်တန်ကို သရေသာ ကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ်အတွက် အကောင်းဆုံးသော ထွက်ပေါက်ဖြစ်မယ့်ပွဲပါ။ တစ်ဖက်မှာလည်း ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့ မန်စီးတီးနဲ့ ချဲလ်ဆီးတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံနေလို့ ဒီပွဲမှာ ရမှတ်ပြည့်ယူပြီး အခွင့်ကောင်းယူဖို့ အာဆင်နယ်ကြိုးစားမှာ သေချာပါတယ်။ Read more... Add new comment
အာဆင်နယ်အသင်း၏ FA ဖလားပွဲစဉ်အား ကြိုတင်သုံးသပ်ကြည့်ခြင်း	Gunner Saw	ဆောင်းပါး	ကစားမည့်ပွဲ - အာဆင်နယ် VS ကိုဗင်ထရီ ကစားမည့်အချိန် - မြန်မာစံတော်ချိန် စနေနေ့မနက် ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ်။ ကစားမည့်ကွင်း - အမ်းမရိတ်
အာဆင်နယ်အသင်း၏ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် (၂၂)အား ကြိုတင်သုံးသပ်ကြည့်ခြင်း	Gunner Saw	ဆောင်းပါး	ကစားမည့်ပွဲ - အာဆင်နယ် Vs ဖူလ်ဟမ် ကစားမည့်အချိန် - မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ်။ ကစားမည့်ကွင်း - အမ်းမရိတ်။ Read more... Add new comment
Aston Villa 1-2 Arsenal - Goal Highlight	Mr.Yan Naing	မှတ်တမ်းများ	Aston Villa 1-2 Arsenal
အာဆင်နယ်အသင်း၏ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် (၂၁) အား ကြိုတင်သုံးသပ်ကြည့်ခြင်း	Gunner Saw	ဆောင်းပါး	ကစားမည့်ပွဲ - အက်စတွန်ဗီလာ Vs အာဆင်နယ် ကစားမည့်ကွင်း - ဗီလာပါ့ခ်ျ ကစားမည့်အချိန် - အင်္ဂါနေ့နံနက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၂ နာရီ ၃၀ မိနစ်။
အာဆင်နယ်အသင်း၏ FA ဖလားပွဲစဉ်အား ကြိုတင်သုံးသပ်ကြည့်ခြင်း	Gunner Saw	ဆောင်းပါး	ကစားမည့်အသင်း - အာဆင်နယ် Vs စပါး ကစားမည့်အချိန် - မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်။ ကစားမည့်ကွင်း - အမ်းမရိတ်ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်ဆက်တိုက် အမ်းမရိတ်မှာ အာဆင်နယ်က စပါးကို အပြတ်အသတ်အနိုင်ယူထားနိုင်တယ်။ ရဂိုးက ၁၁ ဂိုး၊ ပေးဂိုး ၄ ဂိုးပဲ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အာဆင်နယ်ရဲ့ အနိုင်မှတ်တမ်းကတော့ ဒီပွဲမှာ စပါးအတွက် မျှော်လင့်ချက်မဲ့ချင်စရာပါပဲ။ Read more... Add new comment
၂၀၁၃ ကို ပြန်လှည့်ကြည့်ခြင်း....	Gunner Panda	ဆောင်းပါး	နည်းပြ အာဆင်ဝင်းဂါးပြောဖူးတဲ့ စကားရှိပါတယ်။ "တစ်ပတ်ဆိုတာ ဘောလုံးလောကမှာ တော်တော်ကြာတဲ့ အချိန်တစ်ခုပါ။ ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။" တဲ့။ ဒါဆို ၂၀၁၃ ဆိုတဲ့ ရက်ပေါင်း ၃၆၅ ရက်ဆိုရင်ရော…….. အဲဒီ ကာလ အပိုင်းအခြားတစ်ခုမှာ ကျွန်တော်တို့တွေအတွက် အမှတ်ရစရာတွေကတော့……. Read more... Comments (1)
« Start Prev 1234567 8910 Next End »	Page5of 212	Next Match: